Wiil lugu dilay xaafadda Tensta ee ay soomaalidu ku badan tahay | Somaliska
Wiil lugu dilay xaafadda Tensta ee ay soomaalidu ku badan tahay
Wararka aanu ka heleyno xaafadda Tensta ee magaaladda Stockholm ayaa sheegaya in wiil aan weli la shacin dhalashadiisa uu ku geeriyooday isbitaalka, ka dib markii dhaawac ka soo gaaray tacshiirad lugu furay maalintii talaadda. Weerarkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay wiil la socday.
Booliska ayaa horey u soo qabtay labbo ruux oo loo maleeynayo ineey qeyb ka yihiin weerarka wiilkan iyo wii kale oo la socoday oo talaadadii loo geeystay. Telefeyshinka dalka Iswiidhan ee SVT, ayaa shaaciyey in weerarkaan dhacay maalintii talaada uu qeyb ka yahay weerar toddobaad ka sii horeeyey loogu geeystay wiilal soomaali oo ah kuwaasoo ku dhintay goobtii lugu rasaaseeyey.
Wiilka haatan dhintay ayaa boolisku shegeen inuu ka soo jeedo deegaan ahaan magaaladda Malmö ee caaasimadda seddexaad islamarkaasina ay aqoon u leeyiiin. Ugu dambeyntiina warar la isla dhex marayey balse aan la hubin ayaa sheegaya in wiilka dhintay uu yahay wiil soomaali ah. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa xaafadaha ay ajaanibta iyo waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo u dhaxeeya dhalinyarro soomaali oo siyaallo kala duwan ku dirirsan.